Soo-saarayaasha Reel-Profile Low-Profile-Shiine-yaasha Shirkadaha Bixiya & Warshadda
Gargaarka kalluumeysiga ee kalluumeysiga ugu fiican 200 reel qiimo jaban
1. Habka Kalluumeysiga: Kalluumeysiga Badda Kalluumeysiga Kalluumeysiga & Kalluumeysiga Doonta
Nooca 2.Reel: Reel Baitcasting - Iyada oo leh gariire baitcasting ah, waxaad sidoo kale heli doontaa awood dheeri ah oo loogu talagalay tuurista masaafo dheer.Tirada noocaani waxay ku siin doontaa kontarool iyo saxnaan dheeraad ah xagga shubka laakiin waxay u baahan tahay xoogaa xirfad ka badan kuwa roorayaasha.
4.Qiirka Heerarka: 7.2: 1
5. Hanuuninta Gacanta: Midigta bidix
Kalluumeysiga biyaha cusbada ayaa dib u buuxin kara iyo giraangiraha bandhigga Dijital ah 6+1BB giraangiraha kalluumeysiga weyn
Habka Kalluumeysiga: Kalluumeysiga Kalluumeysiga ee Kalluumeysiga Kalluumeysiga
Nooca 2.Reel: Reel Baitcasting - Iyada oo leh gariiradda baitcasting, waxaad sidoo kale heli doontaa awood dheeri ah oo loogu talagalay tuurista masaafo weyn. Reel -ka noocan ahi wuxuu ku siin doonaa kontarool iyo saxnaan dheeraad ah marka aad shubayso laakiin waxay u baahan tahay xirfad aad u yar oo ka badan kuwa loo yaqaan 'spinners'.
3.Qiirka Heerka: 8.0: 1
4. Hanuuninta Gacanta: Midigta Bidix
Badda giraangiraha kalluumeysiga 6+1BB 7.2: 1 Giraangir dhibic biraha ah Doon kalluumeysi oo koob fudud ah
2.Material: Daawaha Aluminium
3.Features: Ultra Smooth-Boodhadh badan oo tayo sare leh ayaa siiya mid aad u siman., Awood leh - Sii awood joojin aan caadi ahayn. Waxay leedahay biraha adag ee birta adag, marsho wadista mesh kaamil ah. Waxaa fiican inaad doorato taxanaha 2000 iyo 3000 haddii aad ku jirto kalluumeysiga biyaha macaan. Haddii aad eryanayso kalluunka weyn ama noocyada biyaha cusbada leh, 4000 ama ka sare ayaa ah ikhtiyaar ka fiican, Xawaaraha Sare - Saamigayaga qalabka xawaaraha sare ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u tuurto kalluunka weyn.
Nooca 4.Reel: Reel Baitcasting - Iyada oo leh gariire baitcasting ah, waxaad sidoo kale heli doontaa awood dheeraad ah oo loogu talagalay tuuritaanka masaafo dheer. Noocan ciribtirka ahi wuxuu ku siin doonaa kontarool iyo saxnaan dheeraad ah xagga kabka laakiin wuxuu u baahan yahay xirfad aad u yar oo ka badan kuwa looxyada.
5.Heesaha Kubadda: 6+1BB
Saamiga Gear: 7.2: 1
7. Hanuuninta Gacanta: Midigta bidix
Relbi jiilaalka Ryobi ee kalluumeysiga garbaha korontada ee garbaha usha kalluumeysiga
1. Habka Kalluumaysiga: Laabashada Kalluumaysiga
Nooca 2.Reel: Reel Spinning - Waa doorbidida xulashada kalluumeysatada badan, ha ahaato bass kalluumeysiga harada ama ha beegsadaan daamurka xeebta. Habka aad u tuurto gariire -wareegga waa inaad iska rogtaa siligga dammaanadda biraha, kaas oo sii daaya xarigga kabka.
Awoodda Line (lbs/yds): 40/190
4. Hanuuninta Gacanta: Hagista Gacanta waa la Beddeli karaa
Qiimaha Warshadda Riverlake AC Birta Kalluunka Biyaha Cusbada leh Kalluumeysatadu waxay giraangiraha kalluumeysiga iibiyaan
3.Ball Saamaynta: 1
4.Qiirka Heerarka: 5.2/1
5. Hanuuninta Gacanta: Hagista Gacanta waa la Beddeli karaa
LP2000 surf -tuurista giraanta kalluumeysiga garbaha garbaha garbaha garba -duubidda kalluumeysiga
Ryobi kalluumeysiga jibba japan ryobi reel reel kalluumeysiga ryobi
Habka Kalluumeysiga: Joogitaanka Kalluumeysiga Kalluumeysiga Ku -Socodka & Kalluumeysiga Kalluumeysiga Guud Kalluumeysiga Bass Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga Biyaha Yar
Nooca 2.Reel: Reel Reel Baitcasting Reel - Iyada oo la adeegsanayo gariiradda baitcasting, waxaad sidoo kale heli doontaa awood dheeraad ah oo loogu shubi karo masaafo weyn. Reel -ka noocan ahi wuxuu ku siin doonaa kontarool iyo saxnaan dheeraad ah marka aad shubayso laakiin waxay u baahan tahay xirfad aad u yar oo ka badan kuwa loo yaqaan 'spinners'.
4.Qiirka Heerarka: 7.3: 1
5. Hanuuninta Gacanta: Midigta